Dood ka taagan Cidda uu xilka kala wareegayo Ra'iisul Wasaaraha Cusub - Awdinle Online
Maalinta Axada ee soo socota ayaa la filayaa in uu xilka la wareego Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, hayeeshee waxaa jirta dood ku aadan sharcinimada xil wareejinta oo la sheegayo in cida uu xilka kala wareegayo uu yahay sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha Mahdi Guuleed.
Warar ay heshay Shabakadda Wararka Awdinle Online ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre uu warqad rasmi ah u qoray Ra’iisul Wasaare Rooble, kuna ogeysiiyay Madaxweynaha, Guddoonka Labada Aqal iyo Maxkamadda sare oo ah inuu isaga xilka ku wareejiyo sifo sharci ah, ayna tahay xogo iyo dukumentiyo qaranka ku saabsan uu ku wareejiyo Raiisal Wasaaraha sida sharciga ah Golaha Shacabka u ansaxiyay.
Markii Xildhibaannada Golaha Shacabka ay sheegeen inay kalsoonida kala laabteen Xukuumaddii Xasan Cali Kheyre 25-kii Bishii Agoosto ayaa Madaxweyne Farmaajo waxaa uu si deg deg ah siihayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha uu u Magacaabay Mahdi Guuleed oo kuxigeen aha, waxaana taasi sharci darro ku tilmaamay Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Siyaasiyiinta mucaaradka.
Previous articleSawiro:- Maxaa Caawa ka socda Madaxtooyada Koonfur Galbeed?
Next articleDowlad Goboleedyada Koonfur Galbeed & Puntland oo heshiis gaaray